Tun Tun's Photo Diary: Yangon Downtown, Sule Pagoda & Mahar Bandular Park
Yangon Downtown, Sule Pagoda & Mahar Bandular Park
2013-Jun-28, Yangon Circular Train ကို အင်းစိန်ထိ စီးရင် အချိန်တွေကြာကုန်မှာဆိုးလို. ရန်ကုန်ဘူတာကြီး မှာ ဆင်းလိုက်တယ်။ မြို.လယ်ခေါင်ဆိုပါတော့။ ရန်ကုန်မြို.လယ်ခေါင် ဘက် ဖြတ်သွား ဖြတ်လာ တော့ခဏခဏ ရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ဓါတ်ပုံဆင်းမရိုက်ဖြစ်ဘူး။
မြို.လယ်ဆိုတော့ အထပ်မြင့်တိုက်တွေပေါတယ်။ လူစည်ကားတယ်။ ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကို ပထမဆုံး တစ်ခေါက်ရောက်ဖူးတာက မှတ်မှတ်ရရ ၁၉၉၇ ခုနှစ်ကပါ။ မန္တလေးကနေ ညရထား စီးပြီးသွားတာပါ။ အဲ့ဒီတုန်းက Trader Hotel ကြီးတွေ.တော့ အရမ်းသဘောကျတယ်။ နိုင်ငံခြား ရောက်သလိုခံစားရတယ်။ ကျွန်တော်ကြီးပြင်း ခဲ့တဲ့ မန္တလေးမှာလို မဟုတ်ပဲ ဘက်စ်စကားတွေ ၊ Taxi တွေပေါတယ်။ လမ်းဘေး ဈေးဆိုင်တွေပေါတယ်။ မြို.တော် အင်္ဂါရပ်နဲ. ကိုက်ညီတယ်လို. ပြောရမှာပေါ့။
ကျွန်တော်နဲ. အတူဓါတ်ပုံလိုက်ရိုက်တဲ့ ရန်ကုန်က အစ်ကို ပြောပြတာ ဒီတံတား မှာ ဟိုလို မိန်းမတွေ customer တွေကို လာလာစောင့်နေတဲ့နေရာဆိုပဲ။
အဲဒီ တုန်းက မြန်မာပြည်မှာ Pee Mak ထိုင်းသရဲကား ခေတ်စား နေတဲ့အချိန်လေ။
မြို.ထဲမှာ construction site တွေ အများကြီးတွေ.ခဲ့တယ်။ အဟောင်းတွေ ဖြတ်ပြီး ၊ အသစ်တွေ ဆောက်နေကြတယ်။ ရန်ကုန်က တချို.တိုက်ခန်းတွေဆိုရင် တော်တော်လေးကို ဟောင်းနေပါပြီ။ နောက်ဆိုရင် တိုက်အသစ်တွေ အများကြီးတွေ.ရတော့မယ်။ ရန်ကုန် ကို တစ်ခေါက်တစ်ခေါက် ရောက်တိုင်း အမြဲတမ်း အပြောင်းအလဲတွေ မြင်ရတယ်။
ရန်ကုန်က လမ်းဘေးစာတွေ အရမ်းသဘောကျတယ်။ အထူသဖြင့် ပုံထဲက စမူဆာသုတ်လို. မုန်.မျိုး။ နောက် လမ်းဘေး အသုတ်စုံ၊ မုန်.ဟင်းခါး တွေကို အရမ်း သတိရတယ်။
လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ. ဆူးလေး ဘုရား (Sule Pagoda) နား ရောက်သွားတယ်။ အခုထိ ဆူးလေး ဘုရားထဲကို တခါမှ မ၀င်ဖူးသေးဘူး။ ဒီတခါလဲ ၀င်မဖူး ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
ဆူးလေ ဘုရားဘက်နေ မဟာဗန်ဓုလ ပန်းခြံ (Mahar Bandular Park) ဘက်ရောက်သွားတယ်။ ဒီပန်းခြံကိုလဲ ပထမဆုံး အကြိမ်ရောက်ဖူးတာပါ။ ဒီပန်းခြံ မှာ ၀င်ကြေး အခမဲ့ ကောက်ခံတယ် ဆိုပြီး facebook မှာ ဖတ်ရလို. တောင် ပြုံးမိသေးတယ်။ အခမဲ့ ၀င်ကြေးကို ဘယ်လိုများ ကောက်ခံသလဲပေါ့။ ပန်းခြံထဲမှာ အတွဲတွေ အများကြီး။ ရာသီဥတုက ပူတော့ ဒီနေရာမှာ လာပြီး အရိပ်လာခို ကြတာ။ ပန်းခြံရဲ. တဖက်မှာ Yangon City Hall ကိုလဲ လှမ်းမြင်ရပါတယ်။
ဒီရှေးဟောင်း အဆောက်အဦးကို Tourist တွေ ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာ ခဏခဏ တွေ.ဖူးတယ်။ Yangon High Court (တရားလွတ်တော်) အဆောက်အဦးပါ။ တကယ့်လက်ရာမြောက်ပြီး ဓါတ်ပုံစားတဲ့ ရှားပါး ရှေးဟောင်း အဆောက်အဦးပါ။
ပန်းခြံမှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို.နဲ. အတူ ဓါတ်ပုံလိုက်ရိုက်တဲ့ အစ်ကို တစ်ယောက်က ကန်တော်ကြီး ဘက်ကနေ ရွေတိဂုံ ဘုရားကို ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်သေးတယ် ဆိုတာနဲ. Taxi နဲ. ကန်တော်ကြီး ဘက်ကို ရောက်သွားပြန်တယ်။ သူက တိမ်ထူထပ်တဲ့ ကောင်းကင် background နဲ. ရွေတိဂုံ ဘု၇ားကို ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်တာတဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့ လူကြုံရှိလို.သာ လိုက်ခဲ့တာ။ အမှန်တကယ် ဒီလို တိမ်ထူပြီး၊ မိုးအုံ.နေရင် ဓါတ်ပုံမရိုက်ချင်ဘူး။ ရိုက်လဲ လှမှာမဟုတ်ဘူး။ မရိုက်တက်တာလဲ ပါတာပေါ့။ သူ.ပုံတွေ ကောင်းမကောင်းတော့ မသိ။ ကျွန်တော့ ပုံတွေကတော့ မစွံဘူး။
ဓါတ်ပုံရိုက်နေတုန်း ဒီလူကြီးက ကျီးကန်းတွေကို အစာလာကျွေးပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ရိုက်စရာ တခုတိုးတာပေါ့။ သူက ဒီနေရာမှာ အစာကျွေးနေကျထင်တယ်။ သူလာတော့ ကျီးကန်းတွေ အများကြီး သူနားမှာ ၀ိုင်းလာတယ်။
ဒါကတော့ ၂၀၁၃ ဇွန်လ မြန်မာပြည် ကို ၁၀ရက်ပြန်တဲ့ ခရီးစဉ် ရဲ. နောက်ဆုံးပို.စ်ပါ။ ၂၀၁၃-ဇွန်လ-၂၉ မနက်လေယာဉ်နဲ. စင်ကာပူ ကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်။ စင်ကာပူ နဲ. ပတ်သတ်တဲ့ ပို.စ်တွေ ဆက်ရေးပါမယ်။
at 6/09/2016 12:04:00 AM
Labels: Food, Myanmar, Myanmar Food, Street, Yangon
Yangon Circular Railway/Train